HomeContact UsNewsLinksမှတ်ပုံတင်ရန် သတင်းတင်ရန်ရေးလိုရာရေးပါစီဘောက် ( c box )Myanmar BlogsPress Confrence အတွဲ(၁) ၊ အမှတ်(၁) ။၂၀၀၇ ခုနှစ်။ဖေဖေါ်ဝါရီလ ထုတ် မင်္ဂလာပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။	Username	Password	Home
WELLCOME TO CHINDWINJOURNA
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL (2
COME TO CHINDWINJOURNAL(1)
WELLCOME TO CHINDWIN JOURNAL(3
6Hot myanmar Model...Read more... mp...Read more... Myanmarmodels ...Read more... NEW FACE MODEL mAY lAY...Read more...	advertisement	You are not authorised to view this resource.You need to login. Login Form	Username	Password	Remember me	Lost Password?
User Menu	Submit News
New Shoes ဆေးရုံရောက်အကယ&#
Two Cup Of Coffee
New Model shows
45 Lessons in Life!
Tint Tint Tun's Hot Fashion
Myanmar Model, Mable Soe
A Family Man, Kyaw Thu
Aung San Suu Kyi Will Be Freed
English asaSecond Language in Junta ?s Jungle City
Customer Complaint! to MAI...
At sitetway (15.1.10)
--Dont drink ice water when---
Increase Sucide Rate
Denies Reports of Mutiny
Burmese Comedian Metta stopped
dassk will be free
Nadi Htut Swe's Hot Fashion
To privatize all fuel stations
Myanmar Sexy Model Girls' Photos Collection
Burmese sexy model girl, Iszle
Myanmar woman for prostitute
Myanmar Model and Singer, Wyne Su Khine Thein's Outdoor
Produce DC (Direct Current) by Limon
Hang In There ( Crazy People Pictures )
The Questions that raise arguments
Written by Kyaw Thu
Myanmar's Colonial Treasures Threatened
car prize downfall
World's Biggest/Largest Everything.
Myanmar Amateur Model
Tavoy Deep Sea Port construction begins
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL
Moe Yu San with Hot Sport Dress
Japan skirts...current rage
Myanmar Famous Model, Tin Moe Lwin with Beautiful Party Dress
CHAPTER ( 1 )
CHAPTER (2)
CHAPTER (3)
CHAPTER (4)
CAPTER (5)
CHAPTER ( 7)
Kyaw Thu: mirror
Tin Moe Lwin with Beautiful Party Dress
Wint Darli's Beautiful Fashion
Htet Htet with Sexy Fashion Dresses
Japan & Myanmar Model
free passenger transport for funera
seven party waiting to register
split in NLD
D K B A Saw Chit Thu's House
Myanmar Bloggers Directory (2)
Sexy,Slippery and Hot Gandawin
Sexy Babe Thie Xandi Mg Mg
wellcome tto chindwinjournal (4)
Melody At the Beach
Modeling Contest of Fatherland
Maw Phu Maung's Sexy Fashion
Nan Su Yati Soe's Fashion
Most Difficult Airports Around the World*
FULLY BUILT IN WHITE GOLD Body
NEW FACE MODEL YU YU SAN
WELLCOME COME TO CHINDWINJOURNAL5
Thinzar Wint Kyaw's Beautiful Fashion
NLD တရားစွဲဖို့ ပြ
EVERY HUMAN MUST WATCH
WELLCOME TO CHINDWINJOUR
COME TO CHINDWINJOURNAL 7
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 8
quit military posts
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 11
wellcome to chindwinjournal 12
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 13
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 14
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 15
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 16
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 17
WELLCOME TO CHINDWINJOURNAL 19
2010 ELECTION 2
2010 DLECTION 3
န၀ဒေကြီးရဲ့တေး ဒို့ မေ လွတ်လပ်ြ
Lates myanmar news
MAY I HAVE A LOOK
MAY I HAVE A LOOK 2
MAY I HAVE A LOOK 3
Tovoy Deep Sea
MAY I HAVE A LOOK 4
Tha Khin Than Htun
Tovoy Deep Sea 2
MAY I HAVE A LOOK 5
MAY I HAVE A LOOK 6
NOT SO BED TO LOOK
What your openion
May I Have A Look3
LIVE DAW SU TRIP
FULLMOON OF THADINKYAUT
NEY HTET NAING
Bo Gyoke Biography
What is myanmar
WELLCOME TO DAW SU FROM DAWE
Militrary controlled civialian govermen
Dr.aung naing s ezplanitoon
Hello-Maw Phu Maung
Let us buyacar
Let;s buyacar
Unrest in Rakhin
Daw khin kyi's Monu&Architect
ARE YOU A FOOL ?
Who's Online	We have 22 guests online	Oxford Advanced Learner's Dictionary at ... English - Myanmar online dictionary at MyOrdbok မြန်မာမီဒီယာများ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်း ဌာနများ President-officeပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနThe Voice Weeklyရန်ကုန်တိုင်းမ်Eleven Media Groupပေါ်ပြူလာရွှေအမြုတေနေရဉ္ဖရာမဇ္ဈိမဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံHot Newsလွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း မြန်မာမီဒီယာများ မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်းဈေးကွက်ဂျာနယ်လောကအလှအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းသံလွင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းပေါ်ပြူလာဂျာနယ်Chic မဂ္ဂဇင်းယခုအပတ်စဉ်မဂ္ဂဇင်းအမှန်သတင်းများဂျာနယ်၇ရက်သတင်းဂျာနယ်အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းပီးပဲလ်မဂ္ဂဇင်းအောင်မြင်မဂ္ဂဇင်းသရဖူမဂ္ဂဇင်းပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမန္တလေးအိုင်ကွန်မဂ္ဂဇင်းချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းအထက်မြန်မာပြည်ဂျာနယ်များအလင်းတန်းဂျာနယ်လျပ်တပြက်ဂျာနယ်သတင်းဆယ့်တစ်ဂျာနယ်အပတ်စဉ်အသံဂျာနယ်အသံဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းဌာနများ ဦးထွန်းလွင်(မိုးလေဝသ)TheNewLightofMyanmarကြေးမုံသတင်းစာမြန်မာ့အလင်းမြန်မာ့သတင်းအစုံအလင် Radio ဘီဘီစီဗွီအိုအေလွတ်လပ်သည့် အာရှအသံဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံမိုးမခCNNAl JazeeraBBCVOARFADVB ဆုံဆည်းရာနစ်နေမန်းမိုးသီးဇွန်ဒီမိုဝေယံဒေါင်းမာန်ဟုန်အညာနွေ တမာမြေမျိုးချစ်မြန်မာညိုကြီး ကိုထိုက် ဒီရေ ဧရာဝတီ ►ဘောလုံးပွဲအဖြေတိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုရန် မင်းသား မင်းသမီး ဒါရိုက်တာ မော်ဒယ်လ်များကျော်သူစင်ရော်မောင်မောင်နေတိုးကျော်ကျော်ဗိုမင်းထက်ကျော်ဇင်ရဲတိုက်မိုးယံဇွန်ကောင်းခန့်နန္ဒလှိုင်စမိုင်းတင်မိုးလွင်တင့်တင့်ထွန်းထွန်းအိန္ဒြာဗိုသန္တာလှိုင်ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဖွေးဖွေးနန်းစုကေဆွမ်နန်းစုရတီစိုးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းအေးဝတ်ရည်သောင်းသင်ဇာဝင့်ကျော်စန္ဒီမြင့်လွင်ဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းခိုင်သင်းကြည်မော်ဖူးမောင်မြလေးထက်မိုးမြင့်ဇင်ဇင်အိမ့်ဖူးငယ်အေပရယ်လ်စောအေးမြတ်သီဟန်New JulietMagnolia CiSnow Silverသီရိရှင်းသန့်ခင်နန်းထိုက်ပိုးလေးချစ်လေးနဒီထွဋ်ုဆွေဆုကဗျာဝင်းထွဋ်ုတာယာပပ၀င်းဆုပန်ထွာမေသက်ခိုင်ပြည့်ဖူးခိုင်ချစ်သုဝေချောရတနာရဝေအောင်မယ်လိုဒီမင်းမော်ကွန်းမီချီကိုမိုးအောင်ရင်ယမင်းသီရိဇော်ချောချစ်ဆုပန်ထွာပုလဲဝင်းမီးမီးသုခမင်းသွေးဂီတရပ်ဝန်း မှ နာမည်ကျော်များဟန်ထွန်းစည်သူလွင်ဆောင်းဦးလှိုင်Cobraစောညီညီကျော်ထွဋ်ုဆွေအနဂ္ဂခန့်ဖြိုးသံသာဝင်းရည်မွန်မေစပါယ်ညိုမေဆွိတင်ဇာမော်သီရိဂျေမောင်မောင်လေးလေးဝါးအေးချမ်းမေကဗျာဘွဲ့မှူးNကိုင်ရာရှင်ဖုန်းထွန်းထွန်း (Examplez)ချန်းချန်းဟဲလေးရေဗက္ကာဝင်းစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ချမ်းအေးဝင်းသျှီရန်ရန်ချမ်းR ဇာနည်မျိုးကြီးချစ်ကောင်းနိင်ဇော်မီးမီးခဲထူးအယ်လင်းCategories A Thin Cho Swe (2) April Kyaw Kyaw (1) April Saw (2) Avril Pontpont (1) Aye Myat Thi Han (2) Aye Myat Thu (9) Aye Wut Yee Thoung (2) Bambino (1) Body Painting (3) Car Show (4) Celebirty's With Tattoos (1) celebirtys' sexy (2) Celebirtys' Snap Shot (24) Celebrity Gossip (1) Celebrity With Bikini (18) Celebrity's Sex Talk (1) Celebritys' Face Book Accounts (1) Celebritys' Hottie (15) Celebritys' Phone Number (1) Celebritys' Sex Tape (6) Celebritys' Tatto (4) Chan Chan (1) Chan Me Me Ko (2) Chit Snow Oo (1) Chit Thel Hnyar (1) Chit Thu Wai (3) Chrissie Wunna (10) Christina (3) Comic (1) Couple (18) Cute (1) Dar Li Linn (2) Ei Phyo Cherry (1) Eindrakyawzin (4) Emily Nandar (1) Gandawin (2) Gossip (3) Hayman Aung Aung (2) Hazel Moe (1) Hnin Htut Swe (1) Hnin Pwint Akare (1) Hnin Wut Yee Thoung (1) Hottie (121) Htet Htet Wint (2) Htet Moe Myat Oo (1) Htet Moe Myint (1) jean (1) Jenny (3) Juu Juu K (4) Khay Me Ko (1) Khin Layy Nwe (1) Khin Myint Zu Hlaing (1) Khin Phome (1) Khine Zaw Thway (1) Khun Sint Naychi (1) L Sai Ze (1) Love Story (4) Marina (1) Maw Phuu Maung (4) May Htut Khaung (1) May Kabyar (1) May Nan Khaung (1) Melody (4) Mi Chi Ko (2) Model (9) Moe Hay Ko (9) Moe Thandar Htet (1) Moe Yu San (5) Moeimagebam.com Hayman Khin (1) Moh Moh Pyae Sone Linn (1) Mone M Thompson (1) Music Show (1) Myanmar Beer (1) Myanmar Classic (5) Myanmar Flim Academy Awards 2009 (2) Myanmar Models (3) Myat Noe Eain (1) Myo Kyawt Myaing (1) Nadi Htut Swe (2) Nadi Wint Naing (5) Nan Khin (1) Nan Su Kay Swan (1) Nan Su's Birthday (4) Nandar Hlaing (2) Nawrat (2) Nay Chi Linn Lei (1) Nay Toe (1) Nge Nge (1) Ni Ni Khin Zaw (1) Nilar Aung Aung (1) Nobel Kyaw Kyaw (1) Notice for can't enter my blog (1) Nude (214) Nwe Nwe Tun (2) Pa Pa Win Khin (1) Pearl Win (5) Photo (626) Phuu Sone (1) Phway Phawy (4) Phway Phway (2) Phyo Thiri Khit (1) Pussy (31) Pwint Nadi Maung (2) Romatic Wedding Fair 2010 (1) Sammie Minaj (1) Sandy Myint Lwin (7) Sexy (1) Sexy Dance (1) Sexy Desktop Wallpaper (1) Shwe Zin (2) Snap Shot (1) Soe Myat Nandar (1) Soe Myat Thu Zar (1) Spy Cam (1) Su Shone Lei (4) Thandar Hlaing (1) Thazin (4) Thinngyan (6) Thinngyan 2011 (2) Thinzar Su Wai (1) Thinzar Wint Kyaw (4) Thiri Shinn Thant (5) Thonedray Oo (1) Tint Tint Tun (3) Video (102) Video Chat (48) Warning For Girls (1) Warso Moe Oo (1) Win Htut Taryar (1) Wine Su Khine Thein (7) World Cup 2010 (1) Wut Mhone Shwe Yee (11) Yadanar Khin (1) Yadanar Mai (1) Yamin Thiri Zaw (1) Yaminn Ko Ko (1) Ye' Lay (1) Ye` Deight (1) Zin Zin Zaw Myint (1) myaperit myape NLD ကို အာဏာမလွဲခဲ့တာ စစ်ခုံရုံးတွေပြောဆိုမှုကြောင့်​ဟုဆို ဒါဖြင့် ခင်များ တို့ မီလီယံနာတွေဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဗျ? 15 minutes ago Favorite Reply Delete Remove PostMyape Rit NLD ကို အာဏာမလွဲခဲ့တာ စစ်ခုံရုံးတွေပြောဆိုမှုကြောင့်​ဟုဆို-ရယ်စရာ ပဲဗျ-ဒါဖြင့် ခင်များ တို့ အဖွဲ့တွေ မီလီယံနာတွေဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဗျ?10 hours ago · LikeUnlike · myaperit myape ချင်းတွင်းဂျာနယ်မိတ်ဆွေများ-ပြန်ရောက်ပါပြီခင်များ-5minutes ago Favorite Reply Deleteံငြိမ်ခံ at Wednesday, June 29, 2011 မြန်မာပြည်သည် ........... တို့ပြည် အစိုးရသည် ........ စစ်တပ် အာဏာသည် .......... သေနတ် တော်လှန်လျှင် .......... ကျည်ဆံ အာခံလျှင် ........... ထောင်ဒဏ် ဝေဖန်လျှင် ............ ပြည်နှင်ဒဏ် အသက်ရှုချင်သေးလျှင် .......... ငြိမ်ခံ Forward mail က ရတဲ့ စာတိုလေး တပိုဒ်ပါ။ ရေးသူနာမည် မဖော်ပြပေးနိုင်တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ဧရာဝတီ ကနေ ထပ်ဆင့်ကုးယူ ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ မြ ဖေ Myape Rit hit counter စာပေ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် var counters99_width = 150;var counters99_height = 175;var counters99_vars="id=735738_2&ln=en"; <a href="http://www.superonlinecasino.com/casino-reviews/rushmore-casino">Rushmorecasino</a> <a href="http://www.fxbeing.com/">fx</a> <a href="http://www.casinoschule.com/noblecasino.html">Noble casino</a> <a href="http://www.99counters.com/">online counter</a> <a href="http://www.onlinecasinoextra.com/">ONLINE CASINO</a> သတင်း RSS Feed ဓာတ်ပုံ Nobel Women's Initiative လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိဖို့ ဒေါ်စု ပြော လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာဖို့ ဆိုရင် လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံ | နားဆင်ရန် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ... “အခုဒီဥပဒေတွေဟာ NLD အတွက် ကြီး မားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးပါနေပါ တယ်။ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျမအနေနဲ့ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ ဒီလို ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အင်အားတရပ်ကိုတောင် မှ ပြန်လည်မွေးမြူရာရောက်ပါတယ်။ ပြည် သူလူထုကလည်း အဲသလို သဘောထားပြီး ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများနဲ့ တသား တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့် ပြည်သူသို့ ပြောကြားခ